आज सोमबार : भगवान महादेवको अराधाना गर्ने दिन, कस्तो होला राशिफल ? – Gandaki Voice
Home/धर्म/ज्योतिष/आज सोमबार : भगवान महादेवको अराधाना गर्ने दिन, कस्तो होला राशिफल ?
आज सोमबार : भगवान महादेवको अराधाना गर्ने दिन, कस्तो होला राशिफल ?
आज मिति २०७७ पुस ६ गते सोमबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २१ तारिक सन् २०२०, श्रीशाके १९४२, नेपाल संवत् ११४१, प्रमादी नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष चलिरहेको छ ।
सौरमान अनुसार आज मार्गशीर्ष शुक्लपक्षको सप्तमी तिथि रहनेछ । आज पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा सिद्धि, करणमा भद्रा, आनन्दादि योगमा मुसल रहनेछ ।
सूर्य धनु राशिमा, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २५ घटि ५० पला अर्थात १० घण्टा २३ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ६ बजेर ५० मिनेटमा मित्र मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ बजेर १२ मिनेटमा हुनेछ ।
तुला : तुला राशि भएकाहरूका लागि आज खोजेका कार्यमा अवरोध आउनेछ । वायुरोगले सताउनेछ । मनामा अशान्ति हुनेछ । पेट रोगले सताउने, यात्रामा कठिनाई, शोकपर्ने समाचार सुन्नु पर्नेछ धैर्यगरी आफ्नो कार्यमा लग्नुहोला । ग्याष्ट्रिक्टले सताउन सक्नेछ, खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुहोला ।
साइत : आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा छन् । त्यसैले उत्तर र पश्चिम बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज सोमबार परेकाले पूर्व दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
बिहान ६ः४७ बजेदेखि ८ः०५ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान ८ः०५ बजेदेखि ९ः२३ बजेसम्म काल बेला
बिहान ९ः२३ बजेदेखि १०ः४१ बजेसम्म शुभ बेला
बिहान १०ः४१ बजेदेखि ११ः५९ बजेसम्म रोग बेला
बिहान ११ः५९ बजेदेखि १ः१७ बजेसम्म उद्धेग बेला
दिनमा १ः१७ बजेदेखि २ः३५ बजेसम्म चर बेला
दिउँसो २ः३५ बजेदेखि ३ः५३ बजेसम्म लाभ बेला
दिउँसो ३ः५३ बजेदेखि ५ः११ बजेसम्म अमृत बेला
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अस्पतालको आईसीयूमा